UMo Fayne Wothando ne-Hip Hop Pleads Unecala ku-PPP Loan Fraud - Isiko Lopop
UMo Fayne Wothando neHip Hop Ebuka Isikhathi Sasejele Ngemuva Kokuncenga Icala Le-PPP Loan Fraud
Ngonyaka odlule, Uthando & amp; I-Hip Hop inkanyezi uMaurice MoFayne ubhekene necala lokukhwabanisa ebhange, kanti manje kubikwa ukuthi ushaye icala lokuvuma icala kuleli cala.
Ngoba TMZ , UFayne wavuma amacala ayisithupha okukhwabanisa kwebhange likahulumeni ngemuva kwezinsolo zokuthi wasebenzisa imali eyizigidi ezimbili zamaRandi kwimalimboleko yoHlelo Lokuvikelwa kwePaycheck ngesikhathi sobhadane lwe-COVID-19 ukuxhasa impilo yakhe. Imalimboleko ayitholile ibiyingxenye yohlelo olufanayo olwethulwe ukusiza amabhizinisi amancane aseshayeke kakhulu ngesikhathi sobhadane, kodwa uFayne kuthiwa usebenzise imali engaphezulu kuka- $ 1.5 million yemalimboleko enjalo ezintweni zokuhloba nokuxhasa izingane.
Emibhalweni yezomthetho, kwavezwa ukuthi uFayne selokhu enziwa ukuthi alahlekelwe imali engango- $ 100,000 kusuka kuma-akhawunti ahlukahlukene asebhange, nawo wonke amaloli ayisishiyagalombili eKenworth T680 awathengile. Ngokucela icala elinecala, iziphathimandla zihoxise amanye amacala angu-14 abhekene nawo. Isihogo futhi sibhekene nesikhathi esisejele esiphezulu sezinyanga eziyi-151, okuyiminyaka engaba ngu-12 nohhafu, kodwa ngaphambi kwesivumelwano sokucela icala wayebhekene neminyaka engama-30 ejele.
Phakathi kwezinto athenga ngazo ngesikweletu sakhe esingu- $ 2,045,800, uFayne wathenga iwashi likaRolex Presidential, isongo ledayimane, nendandatho yedayimane engu-5.73. Ekuqaleni waziphika izinsolo, kepha washintsha isimo sakhe ngemuva kokuthi iziphathimandla zithole imali engamaRandi ayizigidi ezingama-80,000 ekhaya lakhe.
ungazenzela kanjani amabhere akho we-gummy
UMo ubelokhu eboshiwe kusukela ngoDisemba, kusolwa ukuthi wephula imigomo yebhondi, kodwa ngeke agwetshwe kuze kube nguSepthemba. Ngaphambi kwaleso sikhathi, hes ecela ijaji ukuthi limvumele abuye, futhi uthi akayona ingozi yokubalekela noma ukusongela umphakathi wakhe. U-Healso uthi unengozi enkulu yokuthola i-COVID-19 ngenxa yesifo sakhe somoya, yize zonke iziboshwa kufanele zigonywe, futhi u-andhes uphinde wathi sekudlule isikhathi ukuthola ukuhlinzekwa ukulimala ehlombe.
ngubani umdlali we-nba ohamba phambili njengamanje
abadlali abakhulu kunabo bonke besikhathi nba
iresiphi ebomvu yekhekhe elibomvu lakudala kusukela ekuqaleni
Ikhekhe ngaphandle kokufaka uqweqwe lwe-muffin